Uma unquma bahlanganyele womshini ifenisha yesimanje, kufanele wazi ukuthi ngokuhamba lokhu ukukhiqizwa kunzima ngempela ukwenza ngaphandle ukubhola kanye Ukufakwa imishini. Ngalo, ungakwazi sokuprakthiza zonke izimbobo kubalwa kahle ukuze kamuva ukuxhuma izakhi nomunye. Kungenjalo, kuzothatha isikhathi eside impela.
Uma umshini yamathebhu isebenze ngemva ukulungiselela ofanele imidwebo ke umphumela uyoba ngcono, umsebenzi ngeke kuthathe isikhathi esiningi nokuzikhandla, futhi ifenisha izinto etholakala enokwethenjelwa kakhulu. Lokhu imishini ebizayo, ngoba zobuchwepheshe futhi sisivumela ukuthi ukuxazulula izinkinga eziningi, ngakho ukusebenzisa kwangasese ngezikhathi ezithile, akusiyo ofanele, kodwa lokukhiqiza encane kuyoba isixazululo enkulu.
ukubhola kanye Ukufakwa imishini Popular
Uma ufuna ukukhetha imishini echazwe esihlokweni, kufanele ucabangele umfuziselo Vitap ALFA 21 Classic elenziwe e-Italy, okusho it has a izinga kuhle. Phakathi umsebenzi wayo obalulekile kufanele zabelwe ngokusebenzisa imishini ovundlile. Abathengi sinake izici lobuchwepheshe, okungukuthi khona:
umsebenzi ukujula ukuphakama ukulungiswa ikhanda imishini;
ulungise ngesivinini imishini.
Ukwakheka 21 has a uthi lokuphotha. Linganisa ubukhulu nalutho kungenzeka 80 x 30 cm. Lokuphotha elilingana 3.2 cm. Isebenza imishini ngenxa motor 2 kW. Idivayisi ukala 304 kg, kuyilapho intengo $ 5.500. Ezinye amamodeli we production ezifuywayo ushibhile.
Ukukhetha umshini yamathebhu, ungase ucabangele ukukhetha imishini GF 21, okuyinto yakhelwe ukwenza izimbobo nokufakwa ifenisha futhi izingxenye. Umklamo has a ikhanda imishini. Uthi lokuphotha ayiguquki njengoba isibalo nokwakha uthi lokuphotha ezifakiwe. Ubukhulu countertops kukhona 90 x 38 cm.
Iyunithi usebenza motor kagesi ngenxa 1.5 kW. Reserve imishini ukujula kuyinto 8.5 cm. Njengoba imisebenzi eyengeziwe kufanele ugcizelele khona isibonisi digital, okuvumela ukuba ichaze ukushuba we ingxenye. I-opharetha uzokwazi ukusebenzisa ngaphezulu, futhi ukulungiswa okuzenzakalelayo ukujula imishini. Lo mshini yamathebhu ishibhile, intengo salo $ 3200.
isixazululo Modern sezihambile
Okuningi imodeli eziphambili kuyinto umshini GF 2Z, okuyinto kuveza ngaphansi brand Griggio. Phakathi Ukusebenza yayo optsional kuyafana nalokho imishini GF 21, kodwa umehluko itholakala inani nokwakha uthi lokuphotha, okuyinto sifinyelela 23. Isinyathelo phakathi lokuphotha nesibongo ilingana 70,4 cm. Lokhu kwenza ukucutshungulwa workpieces emikhulu. Izindleko uhlala cishe ingashintshiwe futhi ilingana $ 3600.
MZ 7121 Chinese ukubhola kanye Ukufakwa imishini Uhlolojikelele
Uma unquma ukuthenga umshini yamathebhu, akusiyo ukuba imikhiqizo ehlisiwe e China. Ngokwesibonelo, imodeli ezishiwo isihlokwana, inikeza ukunemba okuphezulu, has ukusebenza ephakeme isakhiwo nokwethenjelwa. Lokhu imishini kufanelekile ukukhiqizwa ezinkulu-format futhi abathengi ngabanye.
Lokhu ukubhola kanye Ukufakwa umshini has eyodwa ekhanda imishini. Uthi lokuphotha kuyinto 3.2 cm, imishini 21 has a uthi lokuphotha. Ubukhulu countertops kukhona 125 x 120 cm. I imishini esebenza ngenxa motor kagesi 1.5 kW. Umkhawulo imishini ukujula ifinyelela 6 cm. Kubalulekile ukwaba ikamelo ehlukile ukufakwa kwemishini, ngoba isisindo salo 202 kg. Umshini angathengwa $ 2,500. MZ 7121A kuyinto ukuguqulwa obusha unamapharamitha ezifanayo, kodwa ukuphila isevisi eside.
Sibutsetelo imishini futhi kufakwe imishini kamakhi Maggi System Kuyisidina
Drilling futhi umshini Ukufakwa akuyona into entsha ngisho amakhosi yangasese. Njengoba bazijwayeze ezihlukahlukene imishini yanamuhla, kungenzeka ukuba banake imodeli Maggi System Kuyisidina 21, okuyinto esetshenziselwa ukwenza izimbobo womshini nokufakwa futhi ifenisha yesimanje. Umklamo has Ukucaciswa ezifana nalezo imishini eziye ezichazwe ngenhla.
Njengoba izici zayo iyakwazi ukuhlukanisa usayizi etafuleni eziqongweni, okuyizinto 78,5 x 37,5 cm. Kubalulekile ukusho futhi mayelana nokukhawulela imishini okujule kangako, ilingana 6.5 cm. Ukuze ukukhokhela lokhu imishini kuyodingeka $ 2,500. Isisindo Phiko 275 kg. Omunye umshini yamathebhu ifenisha ezikhiqizwa yilo nomkhiqizi ngaphansi nesiqu 323. Lokhu imishini uyisibonelo ngcono engasetshenziswa ekukhiqizeni emikhulu.
Umklamo has izibopho womoya, ngawo ukunikeza evikelekile okunamathiselwe izingxenye ngaphandle ezinyakazayo yayo ngesikhatsi kokuhlinzwa. Lo mshini yamathebhu ifenisha has sokuprakthiza amakhanda ezintathu, emibili yayo mpo, kuyilapho elinye - enezingqimba. Worktop engavimba izilinganiso 160 x 140 cm ukala impela eningi imishini -. 1.102 kg. Phakathi izici obusebenzayo yilezi:
elula control panel;
amaqembu rotatable mpo isidina ngaphakathi 90 degrees.
Ukuze ukhokhele imishini kuyodingeka $ 20,000.
imishini Universal futhi umshini Ukufakwa
Uma ufuna ukuba ngumnikazi we umshini jikelele kokuhlanganisayo, kufanele kube ukumazi kangcono ezibekiweko lobuchwepheshe imodeli Blum PRO-CENTRE, okuyinto isebenza Drilling a evele mpo futhi enezingqimba, noma ukunciphisa Ukungenela komuntu. Umkhawulo imishini ukujula 9 cm. Isici angabhekwa ukuqokwa umshini, okuyinto ngokuvamile lisetshenziswa inkampani enkulu. Kufanele kangakanani ochwepheshe, futhi intengo salo $ 9500. imishini Power ifinyelela 1,2 kW.
amathuba Omkhulu umshini Hirzt FK 800 L
Uma udinga umshini ukuba isihlahla jikelele, ungakhetha imodeli esiye eshiwo ngenhla. Nge kungenzeka ukuba bayamba yimuphi ikhadi pass olulodwa. Njengoba izici ezinhle imishini yenza yokusebenza kwalo ngezindlela eziningi. Ngemva opharetha ukhetha uhlelo, imishini akudingeki reconfigure ngaphezulu.
Idivayisi inohlelo control kusebenziseka kalula angasetshenziswa ukuze ukhethe uhlelo futhi ushintshe umsebenzi ukuze akwazi ukufeza umsebenzi nezinhlobo ezahlukene nokufakwa. Phakathi Izingxenye ezisemqoka umshini kufanele ezigqanyisiwe:
7 uthi lokuphotha mpo;
grooving eyodwa node;
Uma udinga umshini zibe yizinkuni jikelele, ngawo uzokwazi ukufeza ukukhiqizwa ifenisha oda, samuntu okuchazwe ikhambi ekahle.
Incazelo ukubhola kanye Ukufakwa imishini brand ITALMAC Cuspide 27
Uma ukhetha imodeli umshini ITALMAC Cuspide 27 ke ngaye kuyodingeka bakhokhe ruble 153.600. Kuyinto nemishini imishini izimpumputhe futhi ngokusebenzisa izimbobo izindiza of the panel umnyango. ukwakhiwa Multispindle has a ikhanda rotary angasetshenziswa ukuze bayamba umgodi engela kufika ku-90 gadusov. Imishini ifakwe workpieces womoya uvala, ngosizo okuyinto ungakwazi ukuthuthukisa ukunemba imishini. Lokhu yamathebhu CNC umshini uphelele amabhizinisi ukuthi umkhankaso ukukhiqizwa emafasiteleni, eminyango kanye ifenisha.
Uma unquma ukuba ukhethe imodeli emshinini okukhulunywe ngaye isihlokwana, kufanele bajwayelane ezibekiweko kufanele zabelwe phakathi kwabo inani mpo nokwakha uthi lokuphotha iqembu, okuyinto engavimba workpiece 27. Ububanzi obuyisilinganiselo 1030 mm. Phakathi nokwakha uthi lokuphotha yangaphandle ibanga esiphezulu kungenzeka elilingana 832 mm. Idivayisi yenjini ngenxa 1.5 kW. Ubukhulu zedivayisi yilezi 800 x 3000 x 1380 mm. isivinini Uthi lokuphotha kuyinto 2840 ngomzuzu.
Izici Main imodeli omuhle
Uma unesithakazelo okungenhla sokuprakthiza cindezela phezu kwezinkuni, kufanele bajwayelane nezici zayo, kubalulekile ukuhlukanisa phakathi kwabo:
kungenzeka nenkanuko edlulele onokwethenjelwa workpieces;
Njengoba ukusebenza, lubonakaliswa 27 nokwakha uthi lokuphotha nezilandiso, okungase kanyekanye sokuprakthiza izimbobo ambalwa kude ezithile kusuka komunye nomunye. Kubalulekile wazi futhi ithuba uvikelekile nenkanuko edlulele of izikhala kudeskithophu. Lomsebenzi olunikezwa amasilinda womoya. Ukushintsha ukuma ishidi kungenzeka, ngoba isakhiwo sinamandla abutments lateral.
Lapho abathengi ukukhetha isidina yamathebhu emshinini, intengo ngempela umxhwele futhi iye okukhulunywe ngaye ngenhla, bona wazi, kodwa lula ukuphatha, ngoba isinyathelo unyawo ikuvumela ukulawula isikhundla pnevmoprizhimov. Ngakho, opharetha ongama izandla zombili ngesikhathi esifanayo ukuqondisa workpiece.
Esikhundleni isiphetho: zama-imishini futhi kufakwe imishini
Uma uhlela esikhathini esizayo ukuthenga imishini echazwe esihlokweni, kufanele wazi ukuthi iziphi izinhlobo imishini isidina khona. Bokuqala kwakufanele amadivayisi abangu senzelwe kunye. Lokhu imishini onomzali othini lokuphotha, okuyizinto ayifanele ngakho. Olunye uhlobo umshini has netafula ashiselwe Uhlaka isakhiwo lapho nokwakha uthi lokuphotha eziningana elise.
Ekupheleni kwekhulu elidlule yaqala ukubonakala imishini multi-lokuphotha nge sokuprakthiza ikhanda. Itholakala izimbobo ambalwa ukuze kokungathembeki ka sokuzivivinya ezahlukene. Ibanga phakathi kwayo 32 mm. Olunye uhlobo echazwe amadivayisi - yemishini ngabanye production, banalo ikhanda uthi lokuphotha, isebangeni zibheka noma nendawo, kuncike imbobo oyifunayo.
Uhlu izinsimbi non-ayoni: izici, isicelo
BMW Gran Coupe 6 uchungechunge - Coupe nge iminyango emine
Am - Chord ukuthi wonke umuntu uyazi
Indlela umoya izinwele ngefaskamu: izimfihlo namasu